Shongole iyo Ciidamo badan oo Shabaab ah oo galay Buuralayda Gal-gala
April 10, 2012 Markacadeey
Sheekh Fu’aad Max’ed Khalaf iyo Ciidamo badan oo uu hogaaminayo ayaa galay deegaan Buuralayda Gal-gala, iyadoo Maamulka Puntland ay sheegeen inay ka hortagayaan Kooxda Al Shabaab.
Sida ay Idaacadda Shabelle u sheegeen ilo lagu kalsoon yahay Sheekh Fu’aad Max’ed Khalaf (Shongole) oo ka tirsan Saraakiisha Kooxda Al Shabaab iyo Ciidamo uu hogaaminayo ayaa gaaray deegaan Buuralayda Gal-gala ee gobolka Bari halkaasi oo la sheegay in fariisimo ay ku leeyihiin Ciidamo ka tirsan Al Shabaab.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in Shongole iyo ciidamada uu wato ay gaareen deegaannadaasi saacadihii lasoo dhaafay kaddib markii sida la sheegay ay ka baxeen deegaanno ka mid ah Koofurta Soomaaliya oo ay gacanta ku hayaan Xarakada Al Shabaab.
Lama shaacin waddooyinka ay mareen Ciidamada Al Shabaab ee gaaray deegaan Buuralayda Gal-gala, hase ahaatee hadal heynta ugu badan maalmihii u dambeeyay Puntland waxa ay aheyd in qul qulka dagaalyahanno ka mid ah Shabaab ay gaareen deegaannada Maamulka Puntland.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Sheekh Max’ed Faroole oo maalmo ka hor ka hadlay Munaasabad ka dhacday Magaalada Garoowe ee Xarunta gobolka Nugaal ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanno ka tirsan Kooxda Al Shabaab ay kusoo duuleen deegaannada Maamulkaasi islamarkaana ay ka hortagayaan sida uu hadlka u dhigay.